एमसीसी देशका लागि घातक छ, यही अवस्थामा पास गर्न दिनुहुदैँन ! « Media for all across the globe
एमसीसी देशका लागि घातक छ, यही अवस्थामा पास गर्न दिनुहुदैँन !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत नेताहरु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्न दौडधुप थालेका छन्। शिर्ष नेताहरु संसदबाट पारित गर्न मच्चिएपनि सत्तारुढ पार्टी नेकपा दोस्रो तहका नेता भीम रावल, साझा पार्टी लगायत एमसीसी पास हुन नदिने रणनीतिमा लागेका छन्।
यसै सन्दर्भमा साझा सद्भाव समूह भारतका केन्द्रीय संयोजक गंगाप्रसाद भट्टराईले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट यही अवस्थामा पास गरे भविस्यमा देशका लागि घातक सावित हुने बताएका छन्। एमसीसी सम्झौताभित्र कतिपय प्रावधानहरु असमान र नेपालको संविधान भन्दामाथि रहेको स्पष्ट पारे। साझा पार्टीको एमसीसीमा आपत्ति होइन, आपत्ति त राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्दामाथि रहने सम्झौताको हो– उनले भने।
संशोधन बिना एमसीसी कुनैपनि हालतमा पारित गर्न नहुने संयोजक भट्टराईले बताए। जनताको आक्रोष समेत मध्यनजर गर्न सरकारलाई उनले आग्रह गरे। यही अवस्थामा एमसीसी पारित भए नेताहरु बिरुद्ध जनता सडकमा उत्रने भट्टराईले चेतावनी दिए।